सफल क्रिकेटर : सन्दीप लामिछानेमाथि लाग्यो कर छलीको आरोप ,राजस्वले अनुसन्धान गर्ने! – Life Nepali
सफल क्रिकेटर : सन्दीप लामिछानेमाथि लाग्यो कर छलीको आरोप ,राजस्वले अनुसन्धान गर्ने!
काठमाडौँ। नेपालका सर्वाधिक सफल क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि राजस्व बिभागले अ’नुसन्धान गर्ने भएको छ। सन्दीपले करिब ६ करोड रुपैयाँमा भव्य बंगला किनेका छन् । करिब २० वर्षकै उमेरमा आफ्न कमाईबाट उनले काठमाण्डौंका बुढानीलकण्ठमा बंगला किनेका हुन् । सन्दीपको यो सफलता निकै लोभलाग्दो छ र सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर, नयाँ बंगला खरिद गरेसंगै उनमाथी समस्या समेत थपिएको छ । उनी करको ल’फडामा पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उनको आय र करको विवरणमाथि छा’नविन गर्न थालेको छ । ६ करोडमा घर खरिद गरेको समाचार आएपछि विभागले छानविन गर्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार आयको तुलनामा निकै थोरै मात्र कर तिरेको पाइएपछि छानविन गर्न थालिएको छ ।
सन्दीपले पछिल्लो एक वर्षमै दुई करोड भन्दा धेरै आर्जन गरेका छन् । त्यसको करिब ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष क्यानाडा र बंगलादेश प्रिमियर लिगमा भएको ग्लोबल टी–२० बाट मात्र १२० हजार अमेरिकी डलर कमाएका थिए । यसैगरि पाकिस्तान र क्यारेबियन प्रिमियर लिगहरुमा ५० हजार र ७० हजार डलर लिएका थिए । त्यसैगरि आईपिएलमा २० लाख लिएका थिए । यसमध्य केही रकम एजेन्ट र म्यानेजरले पाउने भएपनि उनको कमाई करिब २ करोड देखिन्छ । जसअनुसार उनले एक वर्षमै करिब ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्न हुन्छ । तर, उनले थारैमात्र कर तिरेका छन् । यो वर्ष उनको कमाई तीन करोड नाघ्ने देखिएको छ । टी टेनदेखि अष्ट्रेलियाको बिग ब्यास तथा इंल्याण्डको प्रतियोगितामा छानिएका छन् ।
इंल्याण्डमा हुने नयाँ फम्र्याटको खेल द हन्ड्रेड बलमा उनी एक लाख पाउण्ड (एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ)मा अनुबन्धित छन् । त्यस्तै टी– १० लिगमा ४५ हजार डलर उनी बिकेका छन् । बिग ब्यासमा पनि करिब ७० हजार डलर पाउने बताइएको छ । यो वर्ष पनि आईपिएल खेल्ने उन्को सम्भावना छ । विभिन्न कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेसडर, क्यानबाट तलब सहित उनको कमाई तीन करोड पुग्ने छ । विश्वका धेरै चर्चित खेलाडीहरु करको लफडामा परेका छन् । मेसी देखि रोनाल्डोसम्मलाई यस्तो कसुरमा सजाय भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी कमाउने सन्दीप पनि करको ल’फडामा परेका छन् । यद्यपि, उनले कर छलि गर्न बैंकबाट कर्जा लिएका छन् । तर, पनि ग’म्भीर छानविन भए उनीमाथि का’रबाही हुने सम्भावना रहेको स्रोतले बताउँछन् ।-दृष्टिन्युजबाट
Previous नेपालमा पहिलो पटक Sastodeal ले Nokia 7.2 बेच्न शुरू गर्यो !
Next नेपालमा भएकाे एटीएम ह्याकबारे सिंगापुरको टोलीले तयार पार्याे यस्तो प्रतिवेदन !